Nghọta bụ Nhọrọ, Eziokwu abụghị | Martech Zone
Wednesday, September 10, 2014 Sunday, July 19, 2015 Douglas Karr
N'ime afọ ole na ole gara aga, anọ m n'ọnọdụ nke ịkọrọ ndị ọzọ ọtụtụ ndụ m n'ịntanetị. Enweela m ọtụtụ njem njem m, m na-arụrịta ụka banyere ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nkà mmụta okpukpe, ana m ekerịta njakịrị na vidiyo, na nso nso a - m kesara otu mgbede ebe m nwere ihe ọ drinksụ drinksụ ole na ole. Aka m adighi kpam kpam uzo online, mana m zuru oke.
Ihe m kporo nghọta bụ okomoko. Anọ m na-eru afọ 50, enwere m azụmahịa nke m, ana m ebi ndụ dị egwu na enweghị ọchịchọ ịkọkọ nde mmadụ. Ndị enyi m hụrụ n'anya na m na-ekerịta ọtụtụ ntanetị na azụmaahịa m na-arụ ọrụ maara ma hụ m n'anya. Ndị enyi ọzọ anaghị enwe ekele maka ya… site na ntamu nzuzu na ịba ụba. Enwere m ndị enyi na ndị ahịa zuru ezu, yabụ, achọghị m ịma ihe ndị ọzọ na-eche.
Anaghị m akwa ụta maka ịkekọrịta ihe ọ bụla m nwere n'ịntanetị. Enwere m ike na ndị ọzọ kwesịrị ịnụ mgba m na-ahụ ihe ọma na ihe ọjọọ nke ndụ. Ekwenyere m na ọtụtụ n'ime anyị na-ejigide mmadụ ụgha n'ịntanetị. Anyị na-eziga foto nke ezinụlọ anyị zuru oke, nri anyị zuru oke, ezumike zuru oke, ụlọ anyị zuru oke… na echeghị m na ọ na-enyere aka. Cheedị na ị bụ onye ọkachamara na-azụ ahịa ma ọ bụ onye ọchụnta ego na ị na-agụ mmelite mgbe emesịrị otu esi enwe rosy na azụmaahịa dị mma kwa ụbọchị, mmadụ nwere ike ịjụ ma ọ bụrụ na ebipụla nke a.
My nghọta abụghị m na-anwa imebi ma ọ bụ wulite aha m n'ịntanetị, ọ bụ naanị m. M na-ekerịta ihe dị ukwuu iji mee ka ndị ọzọ mara na m nwere ụbọchị dị mma, ụbọchị ọjọọ, ụbọchị ndị dị egwu, na mgbe ụfọdụ, obere mmeri ndị ọzọ m chọrọ iso ndị ọzọ mee celebrate ma ọ bụ ọdịda m nwere ike iji ndụmọdụ ụfọdụ. Achọrọ m ịbụ ezigbo ka m na-akọrọ dị ka m nwere ike n'ime ihe kpatara ya. (Onweghi onye na ekerịta ihe niile!)
Mgbe m hụrụ ndụ mmadụ na ntanetị wee hụ izu oke, ọ ga-efunahụ m na nkwenye m na enwere eziokwu ọ bụla na ihe oyiyi ha na-arụ. Ike gwụrụ m ma okwu ha enwechaghị mmetụta, ọ bụrụ na ọ dị. Ọ bụrụ na ha dị njikere ịgha ụgha banyere ndụ ha na ntanetị, ha nwere ike ịgha ụgha maka ihe ndị ọzọ.
Aga m agbakwunye na ndị ọzọ na-echekwa naanị n'ihi na ha ga-ejikwa ụgbọ mmiri siri ike… Ana m asọpụrụ nke ahụ. Y’oburu na ibili n’ulo oru gi, ihe mgbaru ọsọ gi bu iga n’ihu n’ime ulo ulo, you nweghi oke onu. Anyị na-ebi na ọha mmadụ na-ekpe ikpe na ịmepụta ọkachamara ọkachamara nwere ike ịbụ ihe dị mkpa. O nwekwara ike ịbụ na ị ga-abụ akụkụ nke omume gị ka ịdebe ihe nzuzo ma kesaa ihe niile. N'okwu abụọ ahụ, ọ ka nwere ike ịbụ eziokwu, ọ bụ ezie. Naanị m na-akatọ personas ụgha.
Ulo oru di obere na ekwuputa ihe ojoo na ntaneti ma amaghi m nke obula. Ọ bụ ezie na ọkara azụmaahịa niile na-akụ afọ n’ala, ị naghị anụkarị ihe ọ bụla na ntanetị banyere mgba otu ụlọ ọrụ na-agba ruo mgbe oge gafere. Na ọnọdụ akụ na ụba siri ike, nke ahụ adịghị mma. Echere m na anyị kwesịrị ịkọrọ ndị ọzọ banyere ihe ịma aka na anyị na ụlọ ọrụ otú ọzọ ụlọ ọrụ na-ekwesịghị ime otu ihe ahụ mejọrọ anyị mere.
Isi okwu m bụ naanị… ọ bụrụ na ihe niile ị kesara na netwọkụ mmekọrịta gị, ndị ahịa na atụmanya bụ mmadụ ụgha na ihe niile zuru oke, ịgaghị egosipụta nghọta na ịgaghị atụkwasị gị obi. Not bụghị ezigbo. Ọ bụrụ n ’ịkekọrịta oke oke, ị nwere ike ịnwe ohere ị belata ohere gị maka na ndị mmadụ na-ekpe ikpe. Have ga-ahụ ọkwa dị iche iche ga - abara gị na / ma ọ bụ azụmaahịa gị uru. Nke m ghere oghe, mana nke gi nwere ike ogaghi adi. Jiri nlezianya na-aga n'ihu.
Ikekwe anyị kwesịrị ịkpọ usoro ịntanetị anyị ntụgharị, ọ nwere ike ịbụ nkọwa ziri ezi karị.
Sep 11, 2014 na 9:19 PM
Doug dị mma ma doo anya.
Ihe dị mma banyere ịbụ ezigbo ya bụ ịchọpụta ndị ezigbo ndị enyi gị.
Sep 11, 2014 na 9:24 PM
Okwu amamihe, LindaSherman!